Amazon, Target Best Buy uye Walmart vari kupaza mitengo pamakamera eChishanu Chishanu 2017. Zvimwe zveBlack Friday kamera inobata inosanganisira DSLRs kune Fujifilm's Instax kamera.
Nhema Chishanu kamera mutengo unoderedzwa paBest Buy unoshanda kubva muna Mbudzi 23 kusvika Mbudzi 25, nepo Walmart's Nhema Chishanu madhiri achaburitsa pamhepo pa12 am EST munaNovember 23 uye mu-muchitoro zvinopihwa zvinotanga na6 pm yenguva nguva yemusi wekutenda. Amazon yatovhura yavo Yechishanu Chishanu Deals Chitoro pamberi pezuva rekutenga, nepo Target ichizopa madhiri munaNovember 24 na6 am nguva yemuno.
Isu takakomberedza mutengo unoderedza Amazon, chinangwa, Walmart uye Best Buy ichapa yeChishanu Chishanu:
Nhema Chishanu Kamera Inotengesa Pakutenga Kwakanyanya
Canon EOS Mupanduki T6 DSLR Kamera, yakatengwa pamadhora mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, madhora mazana matatu ekuchengetedza. Iyo kamera inouya nekaviri zoom kit (449-300mm uye 18-55mm III lens) uye inopfura vhidhiyo mu75p HD vhidhiyo.
Nikon D7200 DSLR Kamera, $ 999.99, $ 550 yakatemwa kubva pamutengo wayo wepakutanga $ $ 1,549.99. Iyo kamera inouya ne18-55mm uye 70-300mm lenses, yemahara 32GB memori kadhi, 24.2-megapixel CMOS sensor, yakavakirwa-muWi-Fi uye inopfura 1080p HD vhidhiyo.
Sony - Alpha α6300 Mirror isina Kamera, $ 999.99, chengetedza $ 380. Inouya ne16-50mm uye 55-210mm lenses, yemahara 32GB memori kadhi, 24.2-megapixel Exmor CMOS sensor, yakavakirwa-muWi-Fi uye inorekodha mafirimu mu4K HD.
Canon EOS Mupanduki T6i DSLR Kamera, $ 749.99, chengetedza $ 300. Inouya ne18-55mm uye 55-250mm lenses, 24.2-megapixel sensor CMOS, inorekodha mu1080p HD vhidhiyo uye yakavakirwa-muWi-Fi.
Sony Alpha a6000 Mirror isina Kamera, $ 699.99, pasi $ 350 kubva pamutengo wayo $ 1,049.99. Inouya ne16-50mm uye 55-210mm lenses, 24.3-megapixel Exmor CMOS sensor, yakavakirwa-muWi-Fi, inorekodha vhidhiyo yemavhidhiyo 1080/24 / 60p uye inosanganisira yemahara 32GB memori kadhi uye bhegi.
Nikon D3400 DSLR Kamera, $ 499.99, pasi $ 400 kubva pamutengo wayo $ 899.99. Inosanganisira AF-P DX 18-55mm G VR uye 70-300mm G ED maLens, 24.2-megapixel sensor CMOS, zvinyorwa mu1080p HD uye inouya neyemahara 32GB memori kadhi uye bhegi.
Sony Cyber-yakapfura DSC-HX80, $ 299.99, chengetedza $ 70. Iyo 18.2-megapixel yedhijitari kamera inouya neyemahara 32Gb memori kadhi, inotora mifananidzo kusvika 4896 x 3672 pixels uye inoratidzira inodzoserwa OLED yekuona.
Canon PowerShot SX530, $ 229.99, chengetedza $ 150. Iyo 16.0-megapixel digital kamera inopfura mifananidzo inosvika 4608 x 3456 pixels, inotora 1080p yakazara HD vhidhiyo, yakavakira-muWi-Fi uye inouya neyemahara $ 30 yechipo kadhi uye 32GB memori kadhi.
Fujifilm instax mini 9 Instant Firimu Kamera, $ 49.99, chengetedza $ 20. Iyo kamera inouya muSmokey Purple ruvara uye inosanganisira yakavakirwa-mukati meiyo selfie girazi.
Canon EOS 80D DSLR Kamera, $ 1,299.99 chengetedza $ 500. Inosanganisira a18-135mm lens, inotora 1080p HD vhidhiyo uye inouya neyemahara 32GB Memory kadhi.
Nikon D3400 DSLR Kamera, $ 399.99, chengetedza $ 150. Inouya ne18-55mm f / 3.5-5.6G VR lens, 24.2-megapixel CMOS sensor, inorekodha 1080p HD mafirimu uye inouya neyemahara 32GB memori kadhi.
Fujifilm Minion Instax mini 8 Instant Firimu Kamera, $ 69.99, chengetedza $ 30.
Fujifilm instax mini 9 Instant Firimu Kamera Bhuru, $ 74.99, chengetedza $ 30 Bundle inosanganisira Mint Green kamera, kesi, maviri maviri-A mabhatiri, tambo yechiuno, pakiti rimwe reRainbow firimu.
Canon PowerShot ELPH 180, $ 99.99, chengetedza $ 40. Inouya ne20.0-megapixel sensor, yemahara 32Gb memori kadhi.
Canon PowerShot SX720, $ 279.99, chengetedza $ 100. Inouya ne20-megapixel sensor, 40x zoom, yemahara 32GB memori kadhi.
Nhema Chishanu Kamera Inotengesa kuAmazon
Canon EOS Rebel SL1 Dhijitari SLR ine 18-55mm STM Lens, $ 414 (yakasimbiswa kugadziridzwa)
Canon EOS Rebel T6 Dhijitari SLR Kamera Kit, $ 357. Inouya ne18-55mm lens, yakavakirwa-muWi-Fi (Yakagadziriswa Yakagadziridzwa).
Fujifilm X-T2 Mirror isina Dhijitari Kamera, $ 1,499
Panasonic Lumix G7 4K Mirror isina Kamera, ine 14-42mm lens, $ 497.99
Fujifilm X-T20 Mirror isina Dhijitari Kamera, chengetedza $ 100.
Panasonic Lumix ZS50 Kamera, parizvino mutengo uri $ 279
Sony a6000 maviri lens kit, chengetedza $ 200.
Nhema Chishanu Kamera Deals At Target
Canon Rebel T6 DSLR bundle, $ 449.99, chengetedza $ 300. Bundle inosanganisira kamera, 18-55mm lens, 75-300mm zoom lens, bhegi uye 16GB SD kadhi.
Fujifilm Instax Mini 9 kamera bundle, $ 59.99 SAVE $ 25. Inosanganisira kamera uye gumi-kuverenga Rainbow ipapo firimu.
Nikon D3400 DSLR bundle, $ 499.99, chengetedza $ 400. Inosanganisira 18-55mm & 70-300mm lenses nebhegi.
Nhema Chishanu Kamera Inotengesa PaWalmart
Fujifilm Instax Mini 7s Nhema Chishanu Bhuru, mutengo pa $ 55.00. Iyo bundle inosanganisira Mini 7s White Kamera, Mini 7s Ice Blue Kamera Kesi, Ice Blue Wallet Album, uye maviri-mapaki eiyo instax firimu (makumi maviri anodhindisa).
Drone Black Friday Deals: Sales Kubva DJI, Target, Amazon, Toys R Us
Canon Pixma MG4250 kuongororwa: A inodhura-ye-in-one inkjet ine huru yezvinhu
Yakanakisa iPhone 12 Pro Max kamera lens vadziviriri
Aya ndiwo makadhi eSAD aunoda eRaspberry yako Pi 3 B +